ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၃)
ပီတာရဲ့ C box မှာ သူတို့က ကောင်းမူစွာ ဖြေကြားထားခြင်းမရှိသောလည်း ကျွန်တော်သွားရောက်ပြီး မေးခွန်းကို ထပ်မေးပါတယ်.... သိကြတဲ့အတိုင်းဘဲ သူများကို ဘာသာကို မဟုတ်မမှန်သော အကြောင်းရင်းများနဲ့ တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆို သဘောကို ခွေ့လို့ သူများမိဘ ညီအကိုမောင်နှမတွေ ကို ပြန်လည်ပေးစားရမယ်ဆို သဘောကိုခွေ့လို့ တယောက်နဲ့ တယောက်လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီး သဘောကျနေကြတယ်......
မိမိတို့၏ အပုတ်အနံကို ဖော်ပြနေတဲံသူဆို အဲကောင်က အကုသိုလ်ကောင် သူနဲ့ ဆက်ပြောနေမဲ့သူကို မိုြးိကိုးဘဲ ပစ်ချတော့မလိုလို အကုသိုလ်ဘဲ ပိုများလာလိုလို အဲလိုထင်ယောင် ထင်မှားစကားလုံးများနဲ့ တိုက်ခိုက်ပြန်ပါတယ်...ကျွန်တော်ပီတာကျော်ကို သတိပေးဖူးပါတယ်.... အခုကျွန်တော်ရပ်နားတော့မယ့် အစီအစဉ်မရှိပါ။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်.....
ကျွန်တော်၏ လုပ်ဆောင်မူသည် မှားယွင်းနေသော ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပျက်စီးသွားအောင် လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်. ယနေ့မြန်မာပြည်ဟာ လူများစွာက အစိုးရကြောင့် ပြောနေကြသောလည်း ကျတော့ရဲ့ ယုံကြည့်မူကတော့ မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်သက်ဝင်ယုံကြည်ကြလို့ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ရတယ်လို့ ယုံကြည့်ပါတယ်. ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓနိူင်ငံ ဖြစ်လို့ ခေတ်မှီတိုးတက်သော နိူင်ငံဆိုတာ မရှိပါ.... ဗုဒ္ဓဘာသာနိူင်ငံဖြစ်ပြီး သူများဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှူစောက်ရှောက်တတ်သော နိူင်ငံရှိသလား တရုတ်က ဗုဒ္ဓဘာသာနိူင်ငံတဲ့လား ဂျပန်ကကော ဗုဒ္ဓဘာသာနိူင်ငံတဲ့လား နိူင်ငံစလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာနိူင်ငံများ မဟုတ်ပါ....
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိူင်ငံဆိုလို့ သီရိလင်္ကာ၊ ကမ္ဘာဒီယား၊ လာအို၊ ထိုင်း . မြန်မာ ဒီနိူ်ငံများကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိူင်ငံများသာ ဖြစ်ပါတယ်.... အဲရှိသည်နိူ်င်ငံများ အားလုံးကလည်း ပြည်တွင်းစစ်ကို ယခုထိတိုင် ကြုံတွေ့ နေရပြီး သူတောင်းစားနိူင်ငံများလည်း ဖြစ်ပါတယ်..... ထိုင်းတနိူ်င်ငံသာလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာနိူင်ငံများထဲမှာ အချောင်ချီဆုံး အဆင်ပြေဆုံးလို့ ပြောရပါမယ်..... ဂေါတာမနေထိုင်သော နီပေါနိူ်င်ငံပင်လျှင် ဂေါတာမကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူဟာ မရှိသလောက်ကို ရှားပါးပါတယ်..... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူဦးရေပေါင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ သန်းပေါင်း ၃၅၀ ဘဲ ၇ှိပါတယ်...... အိန္ဒိယရဲ့ တနိူင်ငံတည်းမှာပင် လူဦးရေးပေါင်း သန်းပေါင်း ၈၀၀ ၇ှိပါတယ်......
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူဦးရေသန်းပေါင်း ၃၅၀ ဟာ ဘင်္ဂဒေ့ရ်ှနိူင်ငံထက် နောက်ထပ် တဝက် တဝက်နီးပါးမျှသာ များပါတယ်..... ဘင်္ဂဒေ့င်္ရှနိူင်ငံဟာ လူဦးရေပေါင်း သန်းပေါင်း ၂၀၀ကျော်ရှိပါတယ်...... ဒါတွေ အားလုံးဟာ ကျွန်တော်ပါးစပ်နဲ့ ရောက်တတ်ရာနိူးနိူး လျှောက်ပြီး လိမ်ဖြီးနေတာ မဟုတ်ဘဲ အရှိကို အရှိတိုင်း သိဖို့ရာ google ထဲမှာ ရှာဖွေနိူင်ပါတယ်..... ပီတာရဲ့ C box ထဲမှာ ဆက်လျက်ဆွေးနွေးမူက ဒီိလိုပါ။
ဟေ့သူငယ်ချင်းတို့ လူမှားနေပါပြီ ကျွန်တော်ဆဲဆိုပြီး အနိူင်ယူဖို့ပြောဖို့ အကြံမရှိပါ...... ခင်ဗျားတို့ ဘာသာကို ကြည့်မရတာ ကျွန်တော်တယောက်တည်းပင် မဟုတ်ပါ....ခင်ဗျားတို့က တွေ့သမျှဘာသာကို ခင်ဗျားတို့လောက် အဆင့်မ၇ှိ မ၇ှိဘူး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လက်အောက်ခံဘာသာ ခင်ဗျားတို့ဆီက ကူးချတဲ့ ဘာသာလို့ ခင်ဗျားတို့ စွပ်စွဲ တတ်တာကို ကျွန်တော်တို့ သိပြီသားပါ။ ကျွန်တော်လိုဘဲ အခြားတယောက်လည်း ဝင်ရေးတာ ဖြစ်မည်....ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုန်းကြီး နောက်လိုက်မိစ္ဆာလေးများရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို သိပြီးသားမို့လို့ပါ..... ကိုယ်က မေးလိုက်ရင် မဖြေဘူး ဝှေ့လည်ကြောင်ပတ်အရူးခန်းရိုက်ပြီး အဖေ အမေ မောင်နှမတွေ နဲ့ ပေးစားပြီး သူများဘာသာကို မဟုတ်မမှန်သော စကားများနဲ့ စွပ်စွဲတတ်သော အကျင့်ကို ကျွန်တော်အလွတ်ရနေပါပြီ.. ကျွန်တော်ဒီလောက် ခက်ခက်ခဲခဲရေးလာပြီးမှ အပျက်အစီးမခံနိူင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်မေးထားသော မေးခွန်းများအား ဖြေဆိုချင်းမရှိသေးပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ သင်ခန်းစာ မေးခွန်းများကို ဆက်လက်မေးသွားအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်..... ဂေါတာမဟာ သူ့ခန္ဓာမှာ ရှိသော အနာရောဂါကို သာမန်လူတို့ထက်ပင် ပိုပြီးခံနေရတဲ့အပြင် သူအား ယုံကြည်သက်ဝင်ကြသူများကလည်း ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းကြောင့် သက်ဝင်ယုံကြည့်ကြလည်းဆိုတာ ကျွန်တော်မှာ တွေးမရအောင် ဖြစ်မိပါတယ်...... ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ တရားခံကတော့ ဘုန်းကြီးပါပဲ သူတို့ရဲ့ စောက်ပျင်းကြီးပြီး အလုပ်မလုပ်ချင်လို့ ဒီဘာသာကို မဟုတ်မမှန်တွေနဲ့ ဖြည့်စွက်တတ်သော သူတို့အကျင့်ကို ကျွန်တော်အလွတ်ရနေပါပြီ..... ကိုယ့်ဘာသာရဲ့ မဟုတ်မမှန်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများကို ဖော်ပြရလျှင် အဖေအမေကို ဆဲထားထက်ပင် နာတတ်ကြပါတယ်။
ရာဇဂြိုလ်ပြည်၊ ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေစဉ်အခါ။ ဗိမ္မိသာရမင်းကြီး၏သားဖြစ်သော၊ အဇာတသတ်မင်းသားသည်။ ရှင်ဂေါတမ၏ယောက်ဖတော်ဖြစ်သော၊ ဒေဝဒတ်၏စကားကိုနားထောင်၍ ဖမည်းတော်ကိုနန်းကချပြီးလျှင်၊ ခြေဖဝါးတော်ကို ဓါးဖြင့်မွန်းပြီးလျှင်။ ဆားလူးမီးကင်စေ ဟုထောင်မှုးတို့အားပြုလုပ်စေပြီးသည်။ ထိုအခါ၊ ဗိမ္မိသာရမင်းကြီးသည်၊ အလွန်ပြင်းထန်စွာခံစား၊ နာကျဉ်ပါသောကြောင့်။ ဂေါတမသည် တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ကယ်မနိုင်လိမ့်မည်ဟုအထင်ဖြင့် အားကိုးအားထားပြု၍။ ကျယ်သောအသံဖြင့် ကယ်တော်မူပါဟူ၍ အော်ဟစ်သောအခါ၊ ရှင်တော်ဂေါတမ တပည့်တို့သည်ကြားလျှင်၊ ညီတော်အာနန္ဒာအားလျှောက်ထားစေသောအခါ၊ ဂေါတမကပြန်၍မိန့်တော်မူလေသည်မှာ။ ငါလည်းအိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း၊ စသည့်တရားတို့ကို မလွန်သာနိုင်သောကြောင့်၊ ထိုဓမ္မတာတရားလမ်းသို့ဝင်ရဦးမည်ဟု၊ ညီတော် အာနန္ဒာအားပြန်မိန့်တိုလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဂေါတမသည် သူတပါး၏အပြင်ခန္ဓာမာရ်ကိုမအောင်ကြောင်းသိရလေသည်။ ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လည်းဆို ခင်ဗျားတို့ ဂေါတာမဆီမှာ အဘယ်အတွက်ကြောင့် ကိုးကွယ်နေရတာလဲ သိပ္ပံနည်းကျ ဖြေဆိုပေးပါ...... အဘယ်အတွက်ကြောင့် ဆုတွေ တောင်းနေကြတာလဲ သူခေတ်ကာလ သူအသက်ရှင်ကာလာမှာ ရှိစဉ်တောင်မှ တောင်းကျလိုက်တဲ့ သူတွေ အများကြီး ဘယ်သူတဦးတယောက်ရဲ့ အနာရောဂါပျောက်ကင်းအောင် လုပ်ပေးသလဲ သေတဲ့သူကို ရှင်အောင် လုပ်ပေးဖူးလား သေခြင်း ရှင်ခြင်း ကို လုပ်ပိုင်သော အခွင်မရှိသည့်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ....ကျွန်တော်တို့က အဘယ်အတွက်ကြောင့် သက်ဝင်ယုံကြည်ရမှာလဲ ကိုယ်ကိုတိုင် လည်း သာမန်လူထက်ပင် အနာရောဂါခံစားနေရတဲံသူ ကိုယ့်ရော၈ါဝေဒနာခံစားရလျှင်လည်း မကုသပေးနိူင် ဘယ်လိုဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်းကြောင့် ဆုတွေ တောင်းနေတာလဲ ဖြေပေးပါ...... ကျွန်တော်နားမလည်မိအောင် ဖြစ်ရပါတယ်။
ဒီအောက်ကတော့ ကျွန်တော်မေးခွန်းများအား ဖြေဆိုချင်းမ၇ှိဘဲ ကျွန်တော်အားဖြေလည်ဖြေရှင်းပါက အကုသိုလ်များပြီး ငရဲမှာပင် ဂျိုးကတ်တော့မလိုလို နဲ့ ဖြေစရာအဖြေမရှိ သူများဘာသာကို မဟုတ်မမှန်သော စကားများနဲ့ ပြောရရင်တော့ ဝမ်းသာလို့ မဆုံး အကုသိုလ်လည်း မရှိ သြော်တတ်လဲ တတ်နိူင်ပါပေ့ ကိုရွှေမြန်မာတို့ရေ
kov taw chaw , meik lain da amay afyay ko fat kyee par . kha myar tha baw pouk thwar par mae , thu myar barr thar ko ma saw kar par nat . human right so tar ko kha myar kyar boo mar pot , ko yone kyi tar ko koe kwae khont shee tae . kya naw tot buddha bar thar ko bae thu ko ma kha myar lo lite pi ma poke khat par boo , athee nyan shee par , tha myar lae lu pae . lu ka mway lar tar pae lu lo thee par .(ဒီနေရာမှာ လူလို့သိပါတဲ့ ကျွန်တော်က လူဖြစ်နေလို့ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အမှားအယွင်းဘာသာများကို ဖော်ထုတ်နိူ်င်တာပေါ့) thu myar ko ma saw kar par nat . all my fris , dee poke ko nat sat p tot pyine ma pyaw par nat tot apo par pae . thu ma budda bar thar akyaung ko nar ma lae tar pyaw nay lae apo par pae bay mat pay lite par (ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကြောင်းကို နားမလည်ဘူးတဲ့ ဘေးမဲ့ပေးလိုက်ပါတဲ့ ဖြေစရာ အဖြေမရှိသောသူများ၏ စကားလုံးများကတော့ ဘေးမဲ့ပေးလိုက်ပါတဲ့ တတ်လဲတတ်နိူင်ပ့ါပေ ကိုရွှေမြန်မာတို့ရေ) thu nat pyine pyaw ya lote ko si mar arr ku tho po pi myar lar tar pae shee par tae. akyo ma shee par boo
arr lone new year mar kyan mar chan thar kyart par say
Posted by messenger at 3:39 AM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, အမေးအဖြေ